Ndi mmeri nke 2018 International Toilet Tourism Awards kwuputara
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » Ndi mmeri nke 2018 International Toilet Tourism Awards kwuputara
Inweta njem nleta • Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
9 min gụọ
Onu isii a ma ama na ndị njem nlegharị anya gburugburu ụwa enweela okpueze ma na-arịgo n'ocheeze ha maka 2018 na Toilet Tourism Awards. Ndị mmeri meriri James Bond themed loo na elu ugwu, ụlọ mposi na-eme ka ị chee na ị nọ n'oké ọhịa, yana ọdụ ụgbọ elu ebe nkịta na-eduzi nwere ike ịmịpụ n'ụlọ n'ime nkasi obi
Toilelọ mposi isii na-eme njem nlegharị anya gburugburu ụwa enwetawo aha ndị a na-achọsi ike na 2018 International Toilet Tourism Awards. A nabatara nnyefe sitere na ebe ndị njem gafere North America, Europe, Asia na Australia. A na-ekpe ụlọ mposi ikpe maka ụdị ha, quirkiness, ọnọdụ, nnweta ha, na onyinye akụ na ụba na mpaghara ha.
MyTravelResearch.com mepụtara International Toilet Tourism Awards, nke bụ ugbu a n'afọ nke abụọ ha, bụ nke na-achọ igosipụta njikọ chiri anya n'etiti ndị na-agbanwe agbanwe, ụlọ mposi ndị dị ọcha nwere nnukwu atụmatụ yana akụnụba ndị njem obodo na-aga nke ọma.
Toilelọ mposi ndị njem na-emeri nke si gburugburu ụwa gafee mpaghara isii ndị a mara ọkwa taa bụ:
Kachasị mma - Saskatchewan Science Center, Regina, Saskatchewan, Canada. Emere ihe ndozi maka ime ụlọ ịsa ahụ nke abụọ a rụzigharịrị site n'ike mmụọ nke oke ohia nke dị n'ebe ugwu Saskatchewan. Enwere ala n'elu ụlọ nke anya nke oke ọhịa na ụda nke nnụnnụ ọhịa na ụda osisi. A na-ekpuchi ogwe mgbidi dum na ihe onyonyo miri emi nke oke ohia Canada dị jụụ site na onye mmeri na-emeri mmeri Todd Mintz.
Okwu onye ọka ikpe: Na ikpe ụlọ mposi a, ọhụhụ ụzọ ọhụụ dị elu. Loo bụ ahụmịhe zuru oke nke ọhụụ site n'ọhụụ na ụda. Toilelọ mposi dị na etiti sayensị dị ka ịbanye na ụwa ọzọ ebe ị nwere ike ịme azụmahịa gị n'etiti nlegharị anya na ụda nke okike - na-enweghị nchegbu gbasara anụ ọhịa bea. N'ozuzu, echebara nke ọma echiche.
Onye ntinye ego kacha mma - Cummins Mosaic Loo, Cummins, Eyre Peninsula, South Australia, Australia. Ndị obodo ahụ gbanwere ebe mposi na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie site na ọdụ ụgbọ okporo ígwè mbụ ka ọ bụrụ ebe obibi ọha na eze. N'ihi okwu ọnụ, ndị njem nleta na-achọ ụlọ ezumike ugbu a, nke nwere ihe akpụrụ akpụ, mosaics na eserese na-egosipụta oge gara aga karịa nke narị afọ nke 20. Ndị ọchụnta ego dị n'ime obodo na-erite uru ugbu a site n'aka ndị na-agafe agafe site na ịkwụsị ileta ụlọ mposi ochie nke oge ochie na etiti obodo.
Okwu onye ọka ikpe: Otu obodo Cummins si mepụtaghachi ihe bụ ụlọ ọrụ ochie iji weghachite ya na ụzọ ọhụụ ma dị mma. Toilelọ mposi ọha na eze n’obodo ahụ aghọwo ebe ndị njem nlegharị anya na aka ha, nke na-egosi ezigbo nghọta site n’aka ndị obodo. N'adịghị ka ụfọdụ ntinye na onyinye ahụ, Cummins nwere ndị ọbịa ole na ole. Ya mere, ha arụela nnukwu ọrụ na -emepụta mma 'ga-ahụ' nke na-ewepụta ego maka azụmaahịa mpaghara.
Ọnọdụ kacha mma - nkwari akụ La Jolla (A Curio Collection nke Hilton), Shores Drive, La Jolla, California, USA. Sit nọ ọdụ na ala nke iri na otu nke na-ele La Jolla na oké osimiri ahụ, ụlọ mposi ahụ na-enye echiche dị egwu banyere obodo ime obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri nke La Jolla na Pacific Ocean n'akụkụ San Diego.
Onye ọka ikpe kwuru: Ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ echiche dị oke mma nke La Jolla na Pacific site na ime ụlọ ezumike. Na-eche ihu n'ụsọ oké osimiri ahụ, windo ndị buru ibu na-eme ka ha nweta ìhè nkịtị nke na-eme ka ụda olu nke ala ahụ dị n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ dị. Echiche sitere na loo na-ejikọ ndị ọbịa na ọmarịcha njem gbara ha gburugburu. Ọbịa na-enweta a magburu onwe vista saa mgbe niile na-agbanwe agbanwe n'oké osimiri ìhè.
Ọzọkwa na-aja mma na Ọnọdụ Kachasị Mma bụ ndị na-adọrọ adọrọ na ogige Lupton Park dị na Maryborough, Queensland.
Ilelọ mposi kachasị mma - Brisbane Airport, Queensland, Australia. Ezubere ụlọ mposi ndị nwere ike ịnweta nke ọdụ ụgbọ elu Brisbane ka agafe iwu iwu nnweta. Facilitieslọ ọrụ na-agbanwe agbanwe a raara nye ohere maka akụrụngwa pụrụ iche dịka okpokoro ndị okenye, okpokoro na ụlọ mposi nwere rails ndị nwere ike iwepụ maka ndị nwere nnukwu nkwarụ. Ọdịdị sara mbara, na-agbanwe agbanwe na-eme ka ọtụtụ puku ndị nwere nkwarụ na ndị na-elekọta ha nwee ike ịgagharị, ọtụtụ n'ime ha na-egbochi njem. Ọkaibe dijitalụ akuko ana achi achi mgbe nile ịdị ọcha. Ọdụ ụgbọ elu Brisbane nwere ime ụlọ maka nkịta ndị na-eso ndị nwere nkwarụ.
Okwu onye ọka ikpe: Ọpụpụ ịnweta ụgbọ elu nke Brisbane esetịpụla ụkpụrụ ọhụụ iji mee ka njem dị mfe. Usoro ha niile enyerela ndị njem aka nkwarụ ma mee ka ọ dịrị ha na ndị na-elekọta ha mfe iji mkpa na nkasi obi gboo mkpa ha. Ohere maka nkịta nduzi na-egosikwa na Ọdụ ụgbọ elu Brisbane na-eche ma na-ewe ụzọ zuru oke maka njem ị ga-enweta.
Quirkiest Ahụmahụ - Bowl Plaza, Lucas, Kansas, USA. Bowl Plaza bụ ụlọ ezumike ọha nke nwere bling! Ime ụlọ mposi, nke were afọ anọ iji wuo, bụzi ihe na-adọrọ mmasị na Lucas, isi obodo nka na Kansas. A na-ekpuchi mgbidi ime ụlọ ịwụ ahụ n'ime na n'èzí ya na ihe osise zuru ezu nke ndị obodo na ndị na-ese ihe mepụtara. Entirelọ niile ahụ dị ka tankị mposi. Emere ọnụ ụzọ ahụ dị ka mkpuchi ụlọ mposi na-ebuli elu na bench ndị na-anọchi anya ụlọ mposi gbagọrọ agbagọ. Uzo akuku gaa na loos na-esite na nnukwu mposi mposi. Bowl Plaza bụ ihe ama ama na ndị bi na ndị njem na nwere aha ndị ọbịa.
Okwu onye ọka ikpe: toiletlọ mposi ọha nke Bowl Plaza na-egosi nnukwu ntinye aka obodo nke gosipụtara aha ọma obodo Lucas dị ka ụzọ isi na-eduga ebe nka. Ejiri mgbidi nke poselin kpuchie mgbidi ahụ, efere ncheta, ọnụ ọgụgụ ụmụaka, ụgbọ egwuregwu ụmụaka, ihe nkpuchi ihu na ihe ngosi. All ohere bụ quirky ebe ịchụàjà ka creativity na-agba ọgba aghara. Kidsmụaka na ndị okenye hụrụ ya n'anya. Bowl Plaza bụzi ihe na-adọrọ mmasị n'onwe ya.
Ekelerekwara nke ukwuu na ụdị Quirkiest Ahụmahụ bụ nnukwu ụlọ mposi na-apụ apụ n'èzí na Trangie na mpaghara Orana nke New South Wales, Australia.
Onye mmeri na otu onye mmeri maka onyinye zuru ezu na njem mposi - James Bond Loos na Piz Gloria, Murren, Switzerland. Odude na 2970m na ​​elu nke Schilthorn na Switzerland, na Piz Gloria agba gburugburu ụlọ oriri na ọorụ andụ na esenowo center anabatawo a James Bond isiokwu ebe ọ bụ na ebe e ji mee ihe dị ka Blofeld's Lair n'oge eserese nke "On Her Majesty's Secret Service." Emegharịrị na 2017, ahụmịhe mposi nwere mmetụta James Bond nke ọdịyo: Nwa agbọghọ Diana Rigg gosipụtara na enyo mgbe ụmụ nwoke na-akwọ aka. E nwere ihe ịrịba ama maka ụmụ nwoke na ụlọ mposi na-asị, "maa jijiji, emela mkpọtụ" na "Gbalịa ka James." Mụ nwanyị 'loo nwere egwu na ụda na-akụ dị ka onyogho nke James Bond pụtara na enyo n'akụkụ oghere mgbọ. Na ladies 'ime ụlọ mposi e nwere ihe ọdịyo nke Bond sị, "N'abalị taa, ebe m - naanị anyị abụọ."
Okwu onye ọka ikpe: Ewezuga ọmarịcha ịma mma dị na Mt Schilthorn, ụlọ ịsa ahụ James Bond bụkwazi ihe na-atọ ọchị ịga. Toilelọ mposi ndị ahụ anwụghị James Bond ma gbakwunye ihe ịtụnanya na-atọ ọchị maka nlegharị anya na otu n'ime ebe kachasị egwu na Europe.
Gaa na Ndị Okike na Ndị Ikpe nke International Toilet Tourism Awards
N'ime afọ nke abụọ ya, 2 International Toilet Tourism Awards dọtara ntinye 2018 gafee ngalaba ise sitere na mpaghara anọ. A na-emeghe nhọpụta nke ụwa n'ịntanetị site na 30 February ruo 14 May 1.
Ọ bụ Carolyn Childs na Bronwyn White, bụ ndị rụpụtara MyTravelResearch.com nyere 2018 International Toilet Tourism Awards. Carolyn na Bronwyn emeela nchọpụta otu na-elekwasị anya na mmetụta nke ụlọ mposi ọha na eze na ebe ndị njem.
Ikpe na-ebu ikpe site n'aka Clare Whelan Project Manager ITTA maka MyTravelResearch.com, Ken Scott nke ScottAsia Communications, Chris Flynn nke Pacific Asia Travel Association, Bill Forrester of Travability, Chris Veitch (International Accessible Tourism Consultant), Mark Wilson nke Wisdom (Design Onye nkwado nke onyinye a, Sue Hodges nke SHP, Giovanna Lever nke Sparrowly Group, Steve Rosa nke Southern Highlands Tourism (ITTA 2017 Best Economic Contributor Award), Jodie Teaken nke Qantas, na Dick Teaken (Onye isi oche nke ndị ikpe na onye edemede nke akwụkwọ na-abịanụ) na mposi).
Nrite: Onye mmeri (James Bond na-arụ mposi na Piz Gloria, Murren, Switzerland) ga-enweta onyinye AU $ 2000 nyere na World Toilet Day na aha ha na otu mbipụta nyocha MyTravelResearch.com ọ bụla na 2018 (uru AU $ 8000) , na ịnweta mmemme nyocha njem nlegharị anya. Ndị ọzọ na-emeri ụdị otu ga-anata otu ihe, mwepu onyinye ụbọchị World Toilet Day.
Carnival na-eme ka nrughari ọrụ dị ka ọ na-eme ...
Etu ị ga - esi jide n'aka na ndị mmadụ na - agụ mgbasa akụkọ gị ...
Rome nwere akwa ohuru ohuru: oru ngo nke emezighi ...
Nyefee na Doha, Abu Dhabi, Dubai: Ndị njem ụgbọelu ...
Jamaica nabatara onye ọbịa dị nde 1 kemgbe mmalite nke ...
Etihad Airways gbatịrị Verified na akwụkwọ njem njem ...